I-WOWOW 4 Hole 8 Inch Centerset Brass Bridge Ikhishi ompompi nge-Side Sprayer Chrome
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Bridge Kitchen ompompi / WOWOW 4 Hole 8 Inch Centerset Brass Bridge Ikhishi ompompi nge Side Sprayer Chrome
【Solid Brass UkwakhiwaFa Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esindayo senziwe ngethusi eliqinile le-premium futhi sinesisindo esingu-7.76 Ibs. I-Brass ekhishini lompompi wokugoba onokuphela kwe-chrome ukugqwala, ukugqwala, ukumelana nokuvuza, futhi kuqinisekisa ukuphepha kwamanzi nempilo ende.
【I-Brass Side Sprayer ene-Pull-Out Hose】 Ngokucindezela okukodwa kwenkinobho, isifutho se-high-pressure bronze side singafafaza umfudlana onamandla wamanzi ukuhlanza izitsha kanye nokungcola ekhoneni. I-hose efakiwe ingakhishwa ize ifike kuma-intshi angama-59, okulula ukuhlanza noma isiphi isikhundla esizungeze usinki.
【Ukufakwa okululaFa Umpompi wekhishi wekhishi we-antique ukwengeza okuhle ekhishini lakho. Umpompi wasekhishini wevintage uza nazo zonke izinto ezidingekayo zehadiwe nemiyalo yomsebenzisi, okwenza ukufakwa kube lula ngama-30 minus.
【Insizakalo yekhasimendeIkhishi lebhuloho elingu-8 intshi lijabulela ukubuyiselwa okunomkhawulo wezinsuku ezingama-90 newaranti yeminyaka emihlanu. Uma kukhona umbuzo mayelana nompompi webhuloho lethusi, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, singajabula kakhulu ukunikeza isixazululo.
I-High Arc Spout ene-ABS Aerator esusekayo
Ikhwalithi ephezulu ekhishwa umlomo wombhobho we-ABS
Ukuthinta okuthambile ngeminwe ukususa isikali ne-calcium
Kulula ukuyihlanza, gcina izinga lokuphila nelokusebenzisa lisetshenziswa
Izinto Zokuphatha: Ithusi
Izibambo ezi-2 ezinhle ze-chrome zibamba ukulawula okulula kokushisa nokugeleza
Ngokucindezela inkinobho, i-high-pressure brass side sprayer ingafafaza umfudlana onamandla wamanzi ukuhlanza izitsha kanye nokungcola ekhoneni.
Amakhadibhodi wekhwalithi ephezulu ashisayo nabandayo
Yenziwe ngethusi ne-ceramic, inamandla futhi ihlala isikhathi eside ngokuphelele, akukho ukuvuza noma ukuvuza okungasetshenziswa isikhathi eside
1 x 2 isibambo sepayipi lasekhishini
Amasentimitha ayi-1 x 19.68 (50 cm) amanzi ashisayo nabandayo
1 x 59.05 amayintshi (150 cm) khipha ipayipi
1 x imfundo; 1 isethi yezesekeli, amagilavu ​​kanye nemiyalo
SKU: 23115A1C Categories: I-Bridge Kitchen ompompi, Ikhishi Faucets Tags: 4 umgodi, bridge
Amasentimitha angu-17.44 x 13.27 x 2.87